Tohin’ny halatra voamaso tao Toliara : nisy andian’olona nitaky omby, avy eo nandroba | NewsMada
Tohin’ny halatra voamaso tao Toliara : nisy andian’olona nitaky omby, avy eo nandroba
Par Taratra sur 10/03/2018
Nihorohoro ny mponina tao an-tampon-tanànan’i Toliara. Nidina an-dalambe nanao fihetsiketsehana, omaly, ireo andian’olona avy amin’ny foko Antandroy ao Toliara. Nitaky ny omby miisa 33, ho onitry ny namonoana ilay tovovavy voalaza fa nangalarana voamaso izy ireo. Nivadika ho fandrobana anefa izany, ka nisy 63 ireo voasambotra.
Nirefodrefotra ny basy tamin’ny alalan’ny tifi-danitra sy ny grenady lakrimozena nalefan’ny mpitandro filaminana nandrava ny fihetsiketsehan’ireo olona avy amin’ny foko Antandroy nitaky ny hanomezana ny fianakavian’ilay tovovavy 15 taona hita faty tao amin’ny fokontany Besasavy, omby miisa 33, araka ny nifanarahana ho solon’ny fahafatesan’ny havan’izy ireo. Araka ny fampitam-baovao avy any an-toerana, niakatra vao maraina tao an-tanàna niaraka tamin’ny fitaovam-piadiana toy ny antsy lavalela, kibay, lefona, pilotra ary vatobe ireto andian’olona avy amin’ny foko Antandroy ireto, nampihorohoro olona manerana ny tanàna tamin’ny alalan’ny fampijanonana posy rehetra niasa tao Toliara. Vokany, maro ny posy simba, omaly, ka tsy afa-nanohy ny asany toy ny fanaon’izy ireo andavanandro. Raikitra ny fifanjevoana teo amin’ireo mpanao fihetsiketsehana satria nikasa hiditra an-keriny tao amin’ny lapan’ny Fitsarana ireto andian’olona marobe ireto, saingy voasakan’ny mpitandro filaminana izany. Nentin-katezerana ny olona ka niraradraraka ny tora-bato izay nivadika ho fandrobana sy fanimban-javatra ary fidarohana olon-tsotra teny an-dalambe tamin’ny lalana ao an-tampon-tanànan’i Toliara, toy ny ao Bazaribe, Sanfily, Tanambao, Mahavatsy hatrany amin’ny bazary Sakama ary Besasavy, lalana nolalovan’ireo mpanao fihetsiketsehana.
Nanao ny asany ny mpitandro filaminana nanaparitaka tamin’ny alalan’ny tafi-danitra sy ny fandefasana grenady lakrimozena, nanomboka teo Bazaribe sy Bazary Sakama ary hatrany Maninday. Vokany, olona miisa 63 indray voasamboatra raha olona dimy kosa naratra mafy ka naiditra hopitaly avy hatrany.
Nihorohoro ny mponina ao Toliara…
Manoloana ity raharaha ity, nihoroho tanteraka ny mponina ao an-tampon-tanànan’i Toliara, omaly. Tsy nisy sahy nivoaka ny trano ny ankamaroan’ny olona, nanakaton-trano avokoa ireo tranombarotra lehibe ao an-tampon-tanàna rehetra hatramin’ny banky, nikatona ny sekoly. Fantatra tamin’ny alalan’ny fampitam-baovao hatrany fa nisy sekoly tsy miankina miisa roa ao Andamboly Toliara indray nidiran’ireo mpanao fihetsiketsehana an-keriny ka nandositra avokoa ireo mpianatra.
Nandray fepetra koa ny eo anivon’ny Oniversiten’i Maninday ka najanona ny fampianarana satria fantatra fa nikasa hiditra an-keriny tao koa ireo mpanao fihetsiketsehana. Marihina fa isan’ny voasaringotra amin’izao raharaha izao ny Oniversiten’i Maninday amin’ny alalan’ny mpianatra iray voalazan’ny rain’i Eliane (ilay tovovavy 15 niharam-boina) fa nifankatia tamin-janany sy tompon’antoka tamin’ity vonoan’olona ity sady nanala ny voamason-janany. Nampodiana, araka izany, ireo mpianatra sy mpampianatra ao amin’ny Oniversite.
Tsiahivina fa hita faty tsy nisy maso havia, ny 27 febroary 2018 lasa teo, tao Besasavy ity tovovavy 15 taona antsoina hoe Eliane ity. Notondroin’ny rainy ho tompon’antoka tamin’izany ny sakaizany niaraka taminy. Tsy nahafaly ny fianakavian’ilay niharam-boina anefa ny tsy nandoavana ny onitra nifanarahana tamin’ity raharaha ity dia ny omby miisa 33 mba handevenana sy hitondra ny razana any Tsihombe.
Tsy mbola hita kosa hatramin’izao ilay tovolahy mpianatry ny Oniversiten’i Maninday voarohirohy ho tompon’antoka tamin’ity halatra voamaso ity.
Fantatra kosa, araka ny loharanom-baovao avy any an-toerana fa tsy mbola nalevin’ny olona fa navelan’izy ireo ao amin’ilay trano nahitana azy ny fatin’ilay tovovavy. Efa nisy kosa ny fihaonana teo amin’ny lehiben’ny faritra sy ny lehiben’ny foko Antandroy ao Toliara. Andrasana ny vokatr’ity fihaonana ity sy ny fanapahan-kevitra horaisin’izy ireo.